Wararkii ugu dambeeyey ee AFGHANISTAN iyo magaca cusub ee dowladda TALIBAN | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyey ee AFGHANISTAN iyo magaca cusub ee dowladda TALIBAN
Wararkii ugu dambeeyey ee AFGHANISTAN iyo magaca cusub ee dowladda TALIBAN
Taliban ayaa maanta si buuxda gacanta ugu haysa magaalada caasimadda ah ee Kabul marka laga reebo garoonka diyaaradaha, kadib markii madaxweyne Ashraf Ghani uu dalka ka cararay.
Garoonka diyaaradaha ayaa waxaa maamulaya ciidamada Mareykanka, oo isku dayaya inay si nabdoon magaalada ugala soo baxaan muwaadiniintooda, shaqaalaha diblomaasiyadeed iyo Afgaaniyiinta la shaqeeyey.
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Taliban ayaa isku ballaariyey magaalada, waxaana qaarkood ay ku sugan yihiin madaxtooyada.
Afhayeenka Taliban, Suhail Shaheen ayaa sheegay in Banaadirsom ay maalmaha soo socda yeelan doonto wada-hadallo ku saabsan dhisidda dowlad Islaami ah oo loo dhan yahay.
Sarkaal kale oo ka tirsan Taliban ayaa sheegay in magaca cusub ee dowladda uu noqon doono Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan, oo ah magacii horey loogu yaqiin intii Taliban ay xukumi jireen, kahor inta aanu Mareykanka ridin 2001.
Hawada magaalada ayaa waxaa lagu arkayaa diyaaradaha qumaatiga ukaca oo daad-gureynaya shaqaalaha Mareykanka, oo la sheegay inay maalmo ku qaadan doonto inay si buuxda uga baxaan magaalada.
Dadka magaalada laga soo saaray ayaa waxaa ka mid ah safiirka Mareykanka.
Waxaa istaagay duulimaadyadii ganacsiga, waxaana magaalada laga maqlayaa rasaas goos goos ah. Shacab badan oo reer Afghanistan ah ayaa ka cararaya dalka, ayaga oo qaarkood ka cabsi qaba xukunka Taliban.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay inuu dalka ka cararay “si looga hortago dhiig daata,” ayada oo Taliban ay si rasmi ah u galeen madaxtooyada dalka ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee Kabul.
Ghani ma uusan shaacin halka uu u cararay, hase yeeshee warbaahinta ugu weyn Afghanistan ee Tolo ayaa sheegtay inuu aaday dalka Tajikistan.
Previous articleMaxaan Ka Baranay Guushii Barcelona Real Sociedad , Saxiixyada Cusub Xaalkooda
Next articleTaliska Ciidanka xooga oo sheegay inay burburiyeen Xarumo ay lahaayeen Al-Shabaab